Real Madrid Oo Wadahadallo Kula Jirta Mohamed Salah %
Wariye ka tirsan taleefishinka Canal+ ee dalka France ayaa daboolka ka qaaday in ay jiraan wadahadallo hor dhac ah oo u socda Real Madrid iyo weeraryahanka kooxda liverpool ee Mohamed Salah .
Mohamed Salah ayaa xagaagii hore lala xariiriyay inuu u wareegayo horyaalka Spain gaar ahaan Barcelona iyo Real Madrid.
Salah ayaa Liverpool u yimid xagaagii 2017-ka waxa uuna xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay u dhaliyay kooxdaas 44 gool dhamaan tartamada oo dhan .
Xiddiga xulka Masar ayaa sii joogteeyay heer ciyaareedkiisa wacan waxa uuna xilli ciyaareedkiisa labaad dhaliyay 26 gool waxa uuna laba jeer si xigta uu ku guuleystay gool dhaliyaha horyaalka Ingiriiska oo ah xili ciyaareedkaan iyo midkii hore .
Man United ayaa si rasmi ah ugu dhaqaaqday soo xero galinta Aron Wan-Bissaka iyo Patrick Van Aanholt